Angola · Janoary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Angola · Janoary, 2009
Tantara mikasika ny Angola tamin'ny Janoary, 2009
Angola: Ny herisetra ao an-tokantrano no mitombo sa ny fahatsiarovantena?
Lalàna23 Janoary 2009
Nitombo haingana ny tahan’ny herisetra ao an-tokantrano ao Angola fa kosa Sorik’endrika tsara izany: hoe mitatitra misimisy kokoa, efa manakaiky ny levilevy (herisetra) ny manjo ireo vehivavy Angolana – na ry zareo araraotin’ireo vadiny na araraotin’ireo sipany. Kanefa, ny isa ihany ve no nitomba sa ny toe-javatra izay mampiseho ny...
Angola:Mananontanona ny Ebola, nakatona ny sisintany
R.D. Kongo21 Janoary 2009
Vokatry ny fipariahan'ny otrik'aretina Ebola any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo indray, ny governemanta Angoley dia nanapa-kevitra ny hanidy ny sisin-tany manasaraka ny tany roa tonta ,mba hisakana ilay otrik'aretina mahafaty tsy hiditra any amin'ny faritr'i Angola. izany no nahatonga ny hetsika fifindra-monina nahazatra teo anelanelan'i Luanda Norte (faritany avaratra-atsinanan'ny firenena)...
Ebola: Fifehezana ny areti-mandringana Ebola
R.D. Kongo12 Janoary 2009
Voaporofo tokoa ny fisian'ilay valan'aretina mora mifindra, antsoina hoe tazo Ebola any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo. Heverina fa efa mihoatra ny 36 ny isan'ny olona tratran'ity aretina ity ary 12 raha kely indrindra ny isan'ny maty. Miezaka ny hifehy ny fielezan'ity aretina ity i RD Congo, ary manao izay hisorohana...